Ndeipi mikana yekutevera backlinks?
Kazhinji kutaura, zvibvumirano zvisingabvumirwi ndeye URL ipi neipi inoshanda pane imwe nzvimbo kunze kweiyo inounza musikana kudzokera kunzvimbo yako kana akabatwa. A backlink profile iyo iri nguva ndeye kuungana kwezvose zvinotaurwa kubva kumativi ose webhutano izvo zvinoreva kuimba yako. Unhu uye hunobatsira pamisika yako ye-market niche backlinks inogona kuvandudza iwe webhusaiti yepamusoro uye inounza marwadzo akaiswa pamapeji ako. Uye vice verse inobatanidza kubva muhutano hwakanaka spammy website iyo isingatevedzeri mazano eGoogle inogona kuparadza yako yekutsvaga injini yekuedza uye kuita kudonha mu rankings.
Maererano nehutachiona hweGoogle Penguin huchangobva kusimbiswa, zvese zvakaderera shure zvakabva kune dzimwe nzvimbo dzepa spammy zvinoda kuongororwa, uye mawebsite akabatanidzwa mumabasa ekunyengera anoda kupiwa mhosva. Google inoratidzira chete iyo backlinks inobva kune spammy, pasi-yepamusoro-soro, nzvimbo chaiyo yekufananidza zvinyorwa, blog links links, kana mapurisa ekubatanidza. Nzvimbo dzekuwana zviyero zvakasvibiswa zvakanaka
Zvisarudzo zvekusununguka zvinowanzopa vatengesi webhusaiti nedzidzo dzinotevera - urongwa hwemashure e-backlink, rugwaro rwekunyorera rwemashure simba ravo chikwata.
Zvisinei, kana iwe wakagadzirira kubhadhara chikwata chekugadzira zvidzidzo zvekushandisa, iwe uchagoverwa nemishando inotevera kuwedzera kune mamiririri epamusoro: nhoroondo yakajeka uye yakanyatsorondedzerwa, kuenderera mberi kwekutevera, kuve nekugadzirisa kwemashure ekudzokera shure, kuputsika kwemashoko anchor anotsanangura mapeji akasiyana-siyana panzvimbo yako yepaiti, zizivo pamusoro pezvingave zvakashata zvekunze kwenhengo, huwandu humwe humwe hukuru hwemagetsi, nezvimwe zvakadaro.
Pane zvakawanda zvakabhadharwa mazano ekuvakisa anopa vashandi vavo nguva yekuedza pasina (f. e. Semalt digital company). Inokupa mukana wekutarisisa huri hwehutano hwavo uye kusarudza kana iwe uchikoshesa iwe kana kwete. Iwe unogona kusarudza mapiyona anogutsa zvido zvebhizimisi rako uye bhajeti Vazhinji vanobhadharwa mazano ekuvakwa kwemasimba vanogona kukupai mazamu anokosha akawanda uye kunyoresa gadziriro yekuwana unhu hwekubatanidza nehutano kumunda wako.
Zvishandiso zvichakubatsira kutarisa backlinks
Backlink Profile Checker .
Basa rekusununguka harina kutora nguva kuti backlinks ibude. Ichakutarisa yako yezvuru zvekutanga backlinks. Kana uchida kuongorora zvakanyanya, unofanira kutarisa imwe nzira yekuona backlinks yako yose. Iyi sangano ichakupai rondedzero yekutanga iyo inosanganisira URL ye peji iyo backlink kuenda kune yako nzvimbo yekutsvaga, iyo yakanyora mashoko ekubatanidza, mamwe maitiro makuru (PageRank uye OBL). "All Backlinks Kunze" basa rinokuratidzai nzvimbo dzose dzinotaridzika kune chivako chako kana zvigadzirwa. Uyezve, iwe unogona kutarisa nzvimbo apo marati ako akataurwa.
Chirongwa ichi chinopawo vatengi maitiro ekuedza. Semuenzaniso, mwedzi wekutanga wekubatanidza masangano ekuvakira uchasvika $ 0,99. Munguva iyi mwedzi wokuedza, unowana mukana wekusarudza mazano akakodzera ekutsigira SEO kukurudzira, kutanga sangano rekuvaka chikwata, uye kuwana rubatsiro rwemeneja. Kana uchida kuwana zvakawanda, unofanira kubhadhara $ 99 kwemwedzi inotevera. Nokuda kwemari iyi iwe uchawana mabasa akawanda akasiyana anosanganisira:
Mashoko ekunyora maitiro ekugadzirisa nekuwedzerwa kwechimbichimbi chekukura kwemigwagwa;
Chikwata chekuvaka shanduko yekuvandudza kubva kune zvakagadziriswa mitsva nekuvandudzwa kutsvaga mazita;
Kushandiswa kwekukurudzirwa kubva kumishumo nekugadzirisa zvikanganiso zvose zviripo pawebsite Source .